२ सय ६९ जनाको आँखा जाँच, गाउँमै सेवा पाउँदा स्थानीयको मुहारमा खुशी - Butwal Online
२ सय ६९ जनाको आँखा जाँच, गाउँमै सेवा पाउँदा स्थानीयको मुहारमा खुशी
गुल्मी, १५ असार । इस्मा गाउँपालिका ४ दोहलीको रामराज्य माविमा संचालन भएको शिविरमा दुई सय ६९ जनाले आँखाको जाँच गराएका छन् ।
भने ९५ जना जेष्ठ एवं बिपन्न नागरिकलाई चश्मा वितरण गरिएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक गोकर्ण थापाले जानकारी दिए । त्यस्तै १२ जनामा मोतियाबिन्दुको समस्या देखिएको छ । उनीहरुको लागि गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटबाट निशुल्क अप्रेशनको व्यवास्था गर्ने संयोजक थापाले बताए ।
इस्मा गाउँपालिकाको आयोजना तथा नेपाल नेत्र ज्योति संघ आँखा उपचार केन्द्रको प्राविधिक सहयोगमा निशुल्क आँखा उपचार शिविर सम्पन्न भएको हो । शिविरको उद्घाटन गाउँपालिका प्रमुख लक्ष्मण बिष्टले गरेका थिए । उनले आफुहरु निर्वाचित भएपछि थुप्रै बिशेषज्ञ शिविर र स्वास्थ्यका कार्यक्रम संचालन भएको बताउँदै आगामी बजेटमा अझै प्रभावकारी कार्यक्रम समेटिएको बताए ।
नेपाल नेत्र ज्योति संघ आँखा उपचार केन्द्रका नेत्र अधिकृत सुर्य बस्नेत, नेत्र सहायक सृष्टी शाक्यसहितको नेतृवमा ७ जनाको टोलीले आँखा उपचार गरेका थिए । गाउँमै आँखा परिक्षण गर्न पाउँदा दोहलीका विकट स्थानका व्यक्तिहरु पनि अत्यन्तै खुसी भएको वडाध्यक्ष गनु प्रसाद अधिकारीले बताए ।
इस्मा गाउँपालिकाले दोस्रो पटक आखाँ उपचार शिविर संचालन गरेको हो । गत बर्ष इस्मा गाउँपालिका ३ दर्लामचौरमा अप्रेशन सहितको शिविरमा करिव चार सय जनाले सेवा लिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । इस्मा गाउँपालिका वडा नं. ४ कोटकोटेरी र वडा नं. २ मा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई स्थापना गरी सेवा प्रवाह गरिरहेको छ ।
त्यस्तै सुत्केरी पोषण कार्यक्रम मार्फत गत बर्ष २ सय ८८ जनालाई सहयोग गरेको थियो । अहिलेसम्म गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सन्चालन गर्नुका साथै इस्मा र अमरपुर स्वास्थ्य चौकीमा प्रयोगशाला सेवाको सुरुवात गरी सेवालाइ निरन्तरता दिइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रकान्त बस्नेतले बताए । हस्तीचौर स्वास्थ्य चौकीमा एम्बुलेन्स खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
त्यस्तै कुष्ठरोगबाट अपाङ्गता भएका नागरिकलाइ बडा नं ६ मा सहायक सामग्रीको वितरण गरीएको छ । आगामी बर्ष गर्भवती महिलालाई निशुल्क एम्बुलेन्स, गर्तवति महिलाको स्वास्थ्य र पोषणमा सुधार गर्न गर्भवती पोषण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, घरमा हुने सुत्केरीलाई शून्यमा झार्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गाउँपालिका उपप्रमुख बिमला खत्रीले बताइन् ।
त्यस्तै वडा नं. २ मा रहेको सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईमा बर्थिङ्ग सेन्टर सञ्चालन गर्दै सम्पुर्ण बर्थिङ सेन्टरहरुलाई थप ब्यबस्थित गर्ने नीति गाउँपालिकाले अगाडी सारेको छ । जेष्ट नागरिकलाई घरमै उपचार, बिद्यार्थीलाई प्रत्येक महिना स्वास्थ्य परिक्षण गरिने गरि बजेटको व्यावस्था गरिएको उपप्रमुख बिमला खत्रीले बताइन् ।